PressReader - Isolezwe: 2017-10-13 - Bazoziphendulela kolokukokotela
Isolezwe - 2017-10-13 - IZINDABA - BONISWA MOHALE
BAZOZIPHENDULELA kwiCompetition Commission abasolwa ngokukokotela intengo yemifino nezithelo okulindeleke ukuthi bashushiswe maduze.
Izolo Isolezwe likhulume noMnuz Anton Vos onguMqondisi weSubtropico ephethe izinkampani ezidayisa imifino nezithelo ezimakethe okubalwa iDelta Market Agents eseClairwood, eThekwini nezinye eziseGauteng ukuthola ukuthi kuyiqiniso yini ukuthi bakokotela intengo yemifino nezithelo.
UVos utshele Isolezwe ukuthi usebe semakethe yokudayisa imifino nezithelo iminyaka engu-30 njengoba ethola imifino nezithelo kubalimi bese bevumelana ngekhomishini nabalimi kuyodayiswa emakethe.
“Siyizinkampani ezisolwa ngokukokotela intengo yezithelo nemifino sizoziphendulela kuKhomishana weCompetition Commission ngoba akushoyo kuphambene nomthetho futhi akulona iqiniso. Asikaze sihlale phansi sikokotele intengo yemikhiqizo edayiswa emakethe. Sifuna ayeke ukusiqambela amanga okuthi siyasebenzisana ukukokotela intengo,” kusho uVos.
Uthe intengo yokudla inyuswa wukudingeka kwako emakethe, izinga lako, yindlela okupakishwe ngayo negama lomkhiqizo.
Wenze isibonelo sokuthi izaqathe ezingenalo igama ngeke zibize imali efanayo nezinegama ngoba abantu bajwayele ukukhokha imali ethe xaxa uma bethenga umkhiqizo abawaziyo noma bethenga ongenagama.
“Kule minyaka engu-30 esengiyisebenze emakethe yezithelo nemifino kuyaqala ukuthi kube noKhomishana osisola ngokukokotela intengo yokudla. Sisebenza ngemithetho eyenziwa kudala ngakho angiqondi ukuthi kungani sesisolwa ngokukokotela,” kusho uVos.
Uveze ukuthi bayisizile ikhomishini ophenyweni lwayo ngokuvula izindawo abasebenzela kuzo.
Abanikazi bezinye izinkampani ezisolwa ngokukokotela intengo yokudla abathandanga ukukhuluma neSolezwe kodwa bathe bazophendula kwikhomishini.
Khonamanjalo, uMnuz Sipho Ngwema obhekele ezokuxhumana kwiCompetition Commission uthe udaba sebeludlulisele kwiCompetition Tribunal ezokhipha usuku okuzoshushiswa ngalo izinkampani ezithweswe amacala okukokotela intengo yokudla.
Ezinkampanini ezisolwa ngokukokotela kubalwa iBotha Roodt eGauteng nasePitoli, iSuptropico (Pty) Ltd enezinkampani eGauteng naseThekwini, Interaction Market Services Holding (Pty) Ltd, Dapper Market Agents (Pty) Ltd, Dw Fresh Produce CC, Farmers Trust CC eziseCape Town, Noordvaal Market Agents (Pty) Ltd, Marco Fresh Produce Agency, Wenpro Market Agents CC, Wenpro Market Agents eziKwaZulu-Natal, Prinsloo & Venter Market Agents, Fine Bros (Pty) Ltd neDelta Market Agents (Pty) Ltd.
Uma izinkampani zilahlwa amacala zingase zihlawuliswe u-10% wemali eziyingenisa ngonyaka zinikwe nesixwayiso sokuthi zingaphinde zikokotele.